Cover miiska spandex Shiinaha ee arooska ama isticmaalka diyaafadda soo saaraha iyo Badeecada | Jianye
Daboolka miiska spandex ee loogu talagalay arooska ama isticmaalka diyaafadda
La tuuro, Saliid la'aan
Hoyga, Bannaanka, Hoteelka, Arooska, Cashada
daboolka miiska spandex
cad, madow, buluug iyo casaan
miiska diyaafadda & laabanto
50000 Cutub / Cutub bishii
hal pc hal bac bac ah iyo 50 kumbiyuutar oo ku jira kartoon banaanka ah oo loogu talagalay daboolka miiska spandex
Qaab No HY-TC
Waxyaabaha Tayada dharka loo yaqaan 'spandex', 10% lycra + 90% polyester, dhar waa 4 wado oo la kala bixiyay
Dhar GSM Qiyaastii 200g / m2
Midab caddaan, madow iyo casaan (waxaan ku sameyn karnaa midab kasta oo laga heli karo jaantuska midabka ama midab khaas ah)
Cabbirka Miiska 183 * 76 * 74cm & 244 * 76 * 74cm, cabbir kasta oo leydi ah
OEM waa la aqbalay Haa
Isticmaalka Cunto, aroos, guri ama makhaayad
Faa'iidada Si fudud Geli / off, waara, midab qurux badan, Qiimaha ugu fiican-wax ku ool ah, duudduub la'aan, jilicsanaanta gacanta
Qiimaha Muunad muunad bilaash ah iyo xamuul xamuul ah oo macaamilku bixiyo
Waqti Lead ah Muunad qiyaastii 5 maalmood
Waqtiga Wax Soo Saarka qiyaastii 10 maalmood
Lacag bixinta 30% TT horusocod iyo 70% TT kahor alaabada keenista, 100% TT aragga
Isbarasho Waxaan sameyn karnaa cabir sax ah, maxaa yeelay waxaan leenahay cabir miis ahaan
hal pc oo ku jira hal bac bac ah iyo 50 kumbiyuutar oo ku jira kartoon banaanka ah
1. bixi muunad bilaash ah si loo xaqiijiyo
2.Sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha si loo qorsheeyo loona soo saaro
3.oo bixi dukumiintiyada dhoofinta iyo dhoofinta
4. Adeeg dabagalka iibka kadib
Shaoxing Jiangye waxyaabaha dibadda co., Ltd waa soo saare xirfadle ah dhammaan noocyada alaabada alaabada balaastigga ah.Waxay ku taalaa Shangyu Yonghe Industrial Zone, qaybta bari ee Gobolka Zhejiang, Shiinaha. Meeshu waxay 50KM u jirtaa Ningbo Port, iyo 200KM oo u jirta Port Shanghai, halkaas oo ay ku raaxeysato marin u helidda isgaarsiinta. iyo mashiinka wax lagu farsameeyo. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Hongye waa miisas, kuraas iyo kuraas loogu talagalay gudaha iyo dibadda, kuwaas oo ay soo dhaweynayaan dhammaan macaamiisha adduunka oo idil.
Tayada, hal-abuurnimada, iyo sumcadda ayaa aasaas u ah shirkad la aasaasay. Dhammaan alaabooyinka ku jira Hongye waxaa loo qaadan karaa inay yihiin qaab tayo sare leh oo qurux badan. Sawirro ama shaybaarro ka mid ah waxyaabaha wada-soo-saarka ah ee ka socda waddamada adduunka ayaa la soo dhaweynayaa. Aynu isu nimaadno, si aan mustaqbalka uga dhigno mid qurux badan oo ifaya.
1.waa maxay faa'iidada ay leedahay alaabta ceyriinka ah ee loo yaqaan 'HDPE' marka la barbar dhigo waxyaabaha kale, sida PP, ABS?
Waxay ka dhigaysaa miisaska kuwo sii xoog badan, ka fudud, oo adkeysi badan oo fudud, fudud in la nadiifiyo, fudud in la qaado, seay si loo dejiyo.
2.waa maxay farsamada wax soo saarka?
Foornada afuufa iyo birta dahaarka leh ee birta ku dahaadhan
3. Muddo intee le'eg ayuu damaanad qaadka alaabtu iyo sida aan u xaraysiiyo dalab?
hal sano habka saxda ah ee loo isticmaalo
4.Ha ku saabsan MOQ
Weelka 1 * 40HQ waxaad ku qasan kartaa dhammaan miisaska iyo kuraasta. Laakiin haddii uu ka yar yahay 1 * 40 HQ, weelka 20GP, iibsaduhu wuxuu bixin doonaa khidmadda dheeraadka ah ee maxalliga ah USD250.
5.How ku saabsan OEM iyo logo daabacan?
OEM taasi waa caadi, haddii aan helno warqadda oggolaanshaha astaanta calaamadda ee iibsadaha, waannu xoreyn doonnaa astaanta daabacaadda haddii ay dalbato tiro badan
6.waa maxay lacag bixinta sideese alaabta looga keenaa Shiinaha?
30% bixinta hore waxaadna dalban kartaa markab ama waxaan kaa caawin karnaa inaad dalbato markab.Marka alaabtu dhammaato, waxaan ku shubi doonnaa konteenar .Guudiyaha xamuulka ayaa na siinaya B / L waxaan kuu soo diri doonaa nuqul B / L ah emayl ama fakis, waa inaad noogu soo bixi lacag dheelitirka oo waxaan kuu soo diri doonaa asalka B / L CO iyo qaansheegta liiska wax lagu raaco .Waxaad isticmaali kartaa dukumiintiyadaan oo aad alaabtaada kaga heli kartaa kastamka deegaanka.
7.Waa mee suuqeena ugu weyn?
Yurub, koonfurta Afrika iyo wixii la mid ah
Hore: Miis baar isku laaban oo balaastik ah oo fara badan lagu isticmaalo xafladda
Waxaan u abuureynaa sida ugufiican alaabta gudaha iyo alaabada guriga loogu talagalay soo dhaweynta, makhaayadaha iyo warshadaha tafaariiqda adduunka oo dhan.
Waxaan nahay takhasusleyaal alaab-qeybiyeyaal hudheel, oo siiya alaab tayo leh hoteelada iyo maqaayadaha oo ay ku jiraan alaabooyin badan oo jiifka huteelka ah
Waxaan ku takhasusay soo saarista tayada Custom Hotel Furniture.
Sida soo saaraha hudheelka hudheelka ah waxaan u qaabeyn karnaa qaab kasta si aan ula kulanno tilmaamaha dhammaan noocyada hudheellada waaweyn.
Waxaan bixinaa naqshadaha alaabada hudheellada aan waqtigooda dhaafin, laga bilaabo dhaqanka illaa casriga, iyadoo la adeegsanayo qalabka ugu fiican iyo farsamooyinka dhismaha. Waanu ku habeyn karnaa wixii alaab ah ee hudheel ah markaad codsato.
Waxaan soosaaraynaa alaabada hudheelka iyo alaabada hudheellada ah oo loogu talagalay inay ka mid noqdaan Madaxyada hudheellada, Taabbeegyada hudheellada, hudheelka Credenzas, Huteelka Micro Frijiyeyaasha Dharka, Muraayadaha hudheelka, Miisaska hudheelka, Kuraasta hudheelka iyo Miisaska Waxqabadka hudheelka.
Cabbirka waa la habeyn karaa
Midabka waa la habeyn karaa. (Cad, caddaan, madow, casaan, kafee, dahab, iwm)
Qaab ayaa loo habeyn karaa
Qaabka daabacaadda & Qaabka xardhan ayaa loo habeyn karaa.
Tirada khaanadaha waa la habeyn karaa
24 saacadood khadka adeegga
Jawaab deg deg ah 12 saacadood gudahood
Alaabooyin wata shahaado caalami ah
Alaabooyinka 100% QC hubinta kahor rarka
Shan sano oo damaanad ah
OEM, adeegga ODM waa la soo dhoweeyay
Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan dhisno xiriir dheer oo idinkaaga ah, waxaan soo dhaweyneynaa baaritaan kasta iyo warshad soo booqata .mahadsanidin!
Xirxirida iyo rarka:
Garaaca xirxirashada, qayb walba waxaa kujira PE xumbo, gudaha difaac, banaanka labo weji adag oo 5 sanduuq kartoon ah, Sanduuqyada Kartoonada oo ay la daabacaan macaamiisha Logo iyo sharaxaad, buuga tilmaamaha kujira ee fudud ee la isugu imaan karo; Iyada oo leh qaybaha Glass waxaa lagu buuxiyaa loox si looga fogaado jilicsanaanta.
Waxaan bixin karnaa:
Waxaan naqshadeyneynaa oo soo saareynaa qiimaha alaabooyinka lacagta oo leh dammaanad hal sano ah oo ku saabsan dhammaan kala duwanaanshaha muuqda ee lagu muujiyay buugyarahan.
Waxaan bixinaa xirmo adeeg dhameystiran oo kahadleysa sahaminta goobta, sawirada farsamada ee CAD, iyo soo bandhigida xigashada. Waxaa xooga la saarayaa hubinta tayada oo ay taageerto adeeg dhameystiran kadib iibka.
Adeeg naqshad xirfadeed oo buuxa.
Sahanka iyo hagaha rakibida.
Adiga oo adeegsanaya agab iyo tayo sare leh.
Koox shaqo oo khibrad leh.
Qandaraasyada dayactirka si loo hubiyo in hantidaada qiimaha lihi ay ku sii jirto nidaam buuxa oo shaqo.
Maaddaama aan nahay soo saare xirfadle ah, kaliya ma soo saareyno, waxaan sidoo kale naqshadeyneynaa, gaarsiineynaa oo aan leenahay adeegga iibka kadib macaamiisha. Haddii macmiilku u baahdo adeegga rakibaadda, waxaan sidoo kale u diri karnaa farsamayaqaannadayada kormeeraya rakibidda. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale siin karnaa naqshad bilaash ah macmiil kasta waxaanan ku jawaabi doonnaa 12 saacadood haddii macaamiisha ay wax su'aalo ah qabaan.
jaban cover kursiga
Daboolida miiska spandex tayo sare leh oo loogu talagalay kursiga
2018 daboolida miiska isku laaban xaflada arooska
Miiska iibka kulul iyo Kursiga Difaaca Kursiga Difaaca
iibka kulul kursiga la qaadi karo oo jaban daboolaya cha laastikada ...
iibka kulul kuraasta spandex arooska buufin iyo ...